မြန်မာBahan, YANGON ရှိ Innocence Health & Beauty | Drecome
Innocence Health & Beauty | Bahan, YANGON.
Innocence Health & Beauty
Massage Sauna | Spa | Hair Saloon | Nail | Eye Beauty | Parking | English | Air conditioner | English Menu
42(B), 6th floor, New University Avenue Road, Bahan Township Yangon.
Innocence Health and Beauty Spa ကို သြဂုတ်လ၊ ၂၀၁၆ခုနှစ်တွင်စတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီး အမှတ် -၄၂ ဘီ၊ ၆ လွှာ၊ တက္ကသိုလ်ရိပ်သာလမ်းသစ်၊ ဗဟန်းမြို့နယ်တွင် တည်ရှိပါသည်။
ဆိုင်လေး ကို လှလှပပ ပြင်ဆင်ထားပြီး ဇိမ်ရှိစေသော ပရိပဘောဂ အသုံးအဆောင်များကို အသုံးပြုထား သည့် အပြင် မွှေးပျံ့သော ရနံ့ လေးများကို လည်း ပက်ဖျန်းထား သောကြောင့် ဆိုင်ခန်း အတွင့်သို့ ဝင်ရောက် လာသူများအဖို့ စိတ်ကြည်နူး လန်းဆန်းသွား စေ မှာ ဖြစ်ပါသည်။
Innocence Health and Beauty Spa တွင် ရရှိနိုင်သော Services မျာမှာ Hair Salon, Facial and body Spa, Body Scrub, Body Massage, Foot Massage များကို ရရှိနိုင်မှာ ဖြစ်ပြီး ဤဆိုင်လေးတွင် ခေါင်းအစ ခြေအဆုံး တစ်နေရာတည်း ဖြင့် စုံစုံလင်လင် ပြုလုပ် နိုင်ပါသည်။
ဆိုင်လေးမှာက Facial & Body Treatment, Hand & Leg Treatment တွေကို အဓိက ပြုလုပ်တဲ့ အတွက် Treatment လုပ်ချင်သူများအတွက် အလွန်အဆင်ပြေသော ဆိုင်လေးပဲဖြစ်ပါသည်။ ဒါအပြင် အလှအပနှင့် ကျန်းမာရေး အထောက်အကူပြု ပစ္စည်းများကိုလည်း Innocence Health and Beauty Spa လေးတွင် ဝယ်ယူရရှိနိုင်ပါသည်။
ဆိုင်တွင် အသုံးပြုသော ပစ္စည်းများမှာ အရည်သွေး ကောင်းမွန်သည့် အလှကုန်ပစ္စည်း များကို သာလျှင် သုံးထား သောကြောင့် အသားအရေတွက် အထူးပင်စိတ်ချရပါသည်။
ဒါ့အပြင် Customer Service မှာ အထူးပင် ကောင်းမွန်ပြီး ဝန်ထမ်းများမှာလည်း နွေးထွေးပျူငှာ သည့်အပြင် Customer Satisfaction ကို အထူးပင်အလေး ထားသောကြောင့် သင့်အတွက် စိတ်ချမ်းသာမှု ကို ရရှိစေမှာ လည်း ဖြစ်ပါသည်။
ဒါကြောင့် သင့် ရဲ့ တန်ဖိုး ရှိတဲ့ အာလပ် ချိန်တွေ မှာ Innocence Health & Beauty Spa ဆိုင်လေးကို သွားမည် ဆိုပါက သင့်ရဲ့ အလှအပ အတွက် ပြည့်ဝသော ပျော်ရွှင်မှု နှင့် ပင်ပန်း နွမ်းနယ် မှု တွေကို ကို ဖြေဖျောက် စေနိုင်မှာ ပဲ ဖြစ်ပါသည်။
Innocence Health and Beauty Spa ကလည်း သင့်ရဲ့ အလှ အပ နှင့် ညောင်းညာ ကိုက်ခဲ မှု၊ ပင်ပန်း နွမ်းနယ် တွေတို့ကို တဖက် တစ်လမ်း မှ ကူညီ ပေးနိုင် ရန် အမြဲ စောင့်ကြို နေလျက် ရှိပါသည်။
Show the coupon on your mobile and get 20% Discount until end of June.
Innocence health and Beauty
Li Li Beauty Center (Bahan)
No. 44, Than Lwin Rd., Shwe Taung Gyar2wards, Bahan Tsp., Yangon.
121-E,Thanlwin road, Bahan Township, Yangon
No.61, University Avenue Road, Bahan Township, Yangon